FULL MOON DAY OF WARSO
Subject: FULL MOON DAY OF WARSO Thu Jul 17, 2008 9:06 pm
I got mail from my friend about FULL MOON DAY OF WARSO. I want to share all of you. I think every Buddhism should know about this.
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက်တော့ ၀ါဆိုလပြည့် ဒီနေ့ ဟာ ထူးခြားတဲ့နေ့တနေ့ပါပဲ။
"သန္ဓေ၊ တောထွက်၊ ဓမ္မစက်၊ မိန့်မြွက်သံချို၊ လ၀ါဆို" ဆိုတဲ့ လင်္ကာအတိုင်း
(၈) "ဧဟိဘိက္ခု" ဆိုတဲ့စကားကို စတင်ကြားရတဲ့နေ့၊
သစ္စာလေးပါးတရားတော်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆရာတော်ဦးသေဋ္ဌိလ ရဲ့ ရေးသားချက် နှင့် မာဂဓီ (သာစည်) ၏ အခါတော်နေ့များ စာအုပ်တို့မှ အနည်းအကျဉ်း ကောက်နုတ် ဖော်ပြပါရစေ။
Subject: Re: FULL MOON DAY OF WARSO Thu Jul 17, 2008 9:24 pm
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည် သစ္စာ၎-ပါး အမှန်တရားကို ဟောကြားတော်မူခဲ့လေသည်။ ၎င်းသစ္စာ ၄-ပါးကို အမှန်သိလျှင် ချမ်းသာစစ်ကို ရမည်မှာ မလွဲတည်း။
* ပဋိသန္ဓေနေရခြင်းသည် ဆင်းရဲခြင်း၏အကြောင်းဖြစ်၏။
* ဆိုးရွားဟောင်းမြင်း အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းသည်လည်း ဆင်းရဲခြင်း၏အကြောင်းဖြစ်၏။
* ဖျားနာရခြင်းသည်လည်း ဆင်းရဲခြင်း၏အကြောင်းဖြစ်၏။
* သေရခြင်းသည်လည်း ဆင်းရဲခြင်း၏အကြောင်းဖြစ်၏။
* မချစ်မနှစ်လိုအပ်သော သတ္တဝါသင်္ခါရတို့နှင့်အတူတကွပေါင်းယှဉ်ရခြင်းသည် လည်းဆင်းရဲ၏။
* ချစ်နှစ်လိုအပ်သော သတ္တဝါသင်္ခါရတို့နှင် ကင်းကွာရှဲခွာမပေါင်းရခြင်းသည် လည်းဆင်းရဲ၏။
* ပဋိသန္ဓေနေရခြင်း စသော သဘောတရား ငါ့အားမဖြစ်ပါမှုကောင်းလေစွ စသည်ဖြင့် တောင်းတတိုင်း မရခြင်းသည်လည်း ဆင်းရဲ၏။
* အကျဉ်းအားဖြင့် ဥပါဒါန်၏ အာရုံဖြစ်သော ခန္ဓာငါးပါးတို့သည် လည်းဆင်းရဲ၏။
ဤ ဇာတိ စတော တရားသည် ဒုက္ခဖြစ်သော အရိယာတို့သည် သိအပ်သော သစ္စာမည်၏။
ထိုသို့ ဆင်းရဲအမျိုးမျိုးနှင့် ပြည့်လျက်ရှိရသည်မှာ တပ်မက်ခြင်း၊ မတရားလိုချင်ခြင်း၊ ကိုယ်ကျိုးရှာခြင်း စသော လောဘကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ဒုတိယ "သမုဒယသစ္စာ" က ညွှန်ပြလေသည်။
ဘုရားရှင်သည် ဤမျှလောက်ကိုသာ ဟောထားခဲ့လျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော် သည် အဆိုးဘက်ကိုသာ ကြည့်၍ တဘက်သတ်ဟောသော တရားဟု ဆိုရန်ရှိ၏။ သို့ရာတွင် ကမ္ဘာ့ဆေးဆရာကြီးဖြစ်တော်မူသော ဘုရားရှင်သည် ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာ သားတို့၏ ရောဂါနှင့် ၎င်းရောဂါ၏ အကြောင်းရင်းကို ပြပြီး၍ ထိုရောဂါ၏ အကြောင်းရင်းဖြစ်သော လောဘကို ပယ်ဖျက်လျှင် ဆင်းရဲရောဂါအပေါင်း ကင်း၍ ချမ်းသာအစစ်ကို ရနိုင်ကြောင်း တတိယ "နိရောဓသစ္စာ" ဖြင့် ပြတော်မူခဲ့လေ သည်။ ၎င်း ဆင်းရဲရောဂါ ပျောက်ကင်းရန်ဆေးကို စတုတ္ထ "မဂ္ဂသစ္စာ" ဖြင့် ပြတော် မူခဲ့လေသည်။
I can't post it all. So I type it again. Every body forgive me.